Alohan’ny fandefasana ny sora-tanana ho an’ny mpamaky beta, andramo ny mahita format e tua izay mety tsara indrindra ho azy ireo.
Aza mandroni manokana e trimëruar! Aoka ho azo antoka ny mihaino amin’ny saina misokatra.
2 3. Zgjeroni Rrjetin tuaj
4 6. Tour Virtual Blaogy me Manangana
7 9. Ulja e çmimeve
8 10. Reklamimi i paguar
Ny mpamaky bolongana misy anao no mpihaino tsara indrindra amin’ny famokarana ny bokinao! Ny haino aman-jery sosialy dia mety ho fitaovana mahomby amin’ny famokarana bythë.
Famaritana ni fononi
3. Zgjeroni Rrjetin tuaj
Toy ny ezaka rehetra eo amin’ny fiainana, raha ny momba ny famoahana ny tenany, dia manampy tokoa nah mahafantatra n olona marina!
Raha mametra ny fehezan-teny iry ny mpanadina iray, dia tadidio izany.
Blog mysafir dia hanampy anao hanatratra mpihaino vaovao ary hanaparitaka ny teny momba ny bokinao.
Mitadiava mpamaham-bolongana miaraka amin’ny mpamaky kinendry lodër ny anao ihany, ary vakio tsara ny vahiny izay mametraka torolàlana mazava tsara ary alohan’ny hananganana seza iray manokana izay mifanaraka amin’nyog.
6. Tour Virtual Blaogy me Manangana
Matetika izy ireo dia hangataka anao handefa boky (na vitsivitsy) mba handefasana sy / na hamerenana. Ny mpitoraka bilaogy sasany dia hanasa anao handray anjara amin’ny resadresaka iray na manoratra lahatsoratra vahiny. Misy boky an’ny tolotra PR izay handamina bokikely iray ho anao. Ny fonosana dia mety amin’ny $ 40 ka hatramin’ny $ 200, arakaraka ny fampidirana n serivisy. Andramo n mikaroka "tolotra PR momba ny PR" na "tolotra bythë momba ny fitsidihana bilaogy" mba hitadiavana mpamatsy iray, ary ataovy izay hahazoana antoka fa hikarakara tsara azy ireo alohan’ny hanamboarana azy ireo.
9. Ulja e çmimeve
Tsy safidy tsara ho an’ny rehetra izany, fa mety ho tetika mahery raha ampiasaina araka n tokoni ho izy.
Ny safidin’ny vidin’ny vidiny dia mety hahasarika mpividy ary manentana n olona hividy ny bokinao.
Hevero ny fanombohana amin’ny vidiny vonjimaika mandritra ny andro vitsivitsy aorian’ny famoahana azy mba hahazoana mivarotra bebe kokoa sy hananganana bebe kokoa. Blerje Countdown Punon dia ahafahan’ny mpanoratra manefa ny fampidiran-drakitra voafetra fotoana voafetra amin’ny bokiny. Raha manana boky maimaim-poana ianao, manolotra iray ho an’ny fahalalahana (na ho vidin’ny vidiny) dia matetika miteraka fivarotana bebe kokoa amin’ny boky hafa.
10. Reklamimi i paguar
Google AdWords: Afaka gabon keq me Google. Tsy handoa afa-tsy raha misy olona miantso ny dokambarotra hitsidika ny tranonkalanao / rohy amin’ny bokinao. Azonao atao ny mametraka ny teti-bola manokana. Jereo ny antsika Soso-kevitra 5 ho an’ny fanentanana AdWords nahomby.
Shpalljet në Facebook: Amin’ny Facebook, pasi të keni keqfidy ny karazan’olona tianao hahatratrarana ny bokinao ianao, izay hahatonga ny dokambarotra ho azo ampiharina bebe kokoa ary hitondra ny vokatra hitanao. Tahaka ny Adiresy Google, dia afaka mametraka teti-bola izay afaka mifototra amin’ny fetran’ny fandefasana isan’andro ho an’ny dokambarotra iray na ny totalin’ny fampielezan-kevitra ny mpanjifa.
Reklamat në Instagram: Instagram dia iray amin’ireo sehatra fampiroboroboana lehibe indrindra eran-tany, miaraka amin’ny vondron’olona mihoatra ny 500 tapitrisa. Ny dokambarotra dia azo novidina sy voatantana tamin’ny alalan’ny serasera ho an’ny tenany manokana ary ny tetibola dia mety ho tokana ho an’ny mpanoratra tsirairay.
Torohevitra amin’ny fiasana amin’ny mpamaky beta Alohan’ny fandefasana ny sora-tanana ho an’ny mpamaky beta，andramo